၁ ။ ရေတိမ်ဆိုဘာလို့ခတ်လို့မရတာလဲ ။
ရေတိမ်ဆိုခတ်မရခြင်းအကြောင်းကတော့ V.Rohto မျက်စဉ်းများသည် Eye Vitamin အုပ်စုဝင်ဖြစ်ပြီး မျက်စိအားဖြည့်ဆေး အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိအားဖြည့် Vitamin အများစုဟာ ရေတိမ်မဖြစ်အောင်အနည်းငယ် ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း ရေတိမ်အတွက်အဓိက ထုတ်လုပ်ထားသော မျက်စဉ်း မဟုတ်ပါ ။ ထို့ကြောင့် ရေတိမ်ရှိနေသည်ဟု သိပါက မျက်စိဆရာဝန်ဖြင့်တိုင်ပင်ပြီး သေသေချာချာ ကုသသင့်ပါသည်။
၂ ။ V.Rohto မျက်စဉ်းအားလုံးဟာ Eye Vitamin တွေပါလား ။ မျက်ကပ်မှန်တပ်ထားစဉ် ခပ်လို့ရပါသလား။
V.Rohto မှာ လက်ရှိ မျက်စဉ်းလေးမျိုး ရှိပါတယ် ။ New V.Rohto , V.Rohto Cool , V.Rohto Vitamin နဲ့ V.Rohto Dry Eye တို့ဖြစ်ပါတယ် ။ New V.Rohto , V.Rohto Cool , V.Rohto Vitamin တို့က Eye Vitamin တွေပါ။ Eye Vitamin အမျိုုးအစားတွေကို မျက်ကပ်မှန်တပ်ထားစဉ်တွင် ခပ်လို့မရပါ။မျက်ကပ်မှန်မတပ်ခင်နှင့် မျက်ကပ်မှန်ချွတ်ပြီးအချိန်တွင် သုံးလို့ရပါတယ်။ V.Rohto Dry Eye ကတော့ မျက်ကပ်မှန်တပ်နေစဉ်နဲ့ မျက်ရည်ခမ်းခြောက်တဲ့ ရောဂါရှိသူများ အသုံးပြုနိုင်တယ့် မျက်ရည်တု eye drop လေးဖြစ်ပါတယ် ။
၃ ။ဘယ်အရွယ်မှ စပြီးခတ်လို့ရပါသလဲ။
V-Rohto Eye Drops ကို အသက် (၆) နှစ်ကနေစပြီးခတ်နိုင်ပါတယ်။ V.Rohto မျက်စဉ်းများက မျက်စိအားဖြည် Vitamin ဖြစ်ပီး မျက်စိအားနည်း ညောင်းညာကိုက်ခဲမှု အတွက်
အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ သို့သော်သတိပြုရမည်မှာ မျက်စိပြင်းထန်စွာထိခိုက်မိပြီး မျက်ကြည်လွှာ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာရနေလျှင် မည်သည့်အရွယ်အဆို အသုံးပြုရန်မသင့်ပေ ။ ထိုဒဏ်ရာများ
ပျောက်ကင်းသွားပြီးဆိုလျှင် ပုံမှန်ပြန်အသုံးပြု၍ရပါသည် ။
၄ ။ V.Rohto မျက်စဉ်းတွေရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကိုပြောပြပေးပါ ။
V.Rotho မျက်စဉ်းတွေမှာကောင်းတာတွေကတော့အများကြီးပါပဲ ။ မျက်စိကိုအမြင်အာရုံကြည်လင်ရုံမျှမက၊ မျက်လုံးအိမ်ရှိသွေးကြောများနီရဲခြင်း ၊ မျက်သားတက်ခြင်း ၊ ညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်း၊ မျက်လုံးသွေး
ကြောလေးများဖွင့်ပေးခြင်း ၊ မျက်စိယားယံခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် မျက်စိအမြင်ေ၀ဝါးခြင်း၊ မျက်ရည်ပူနှင့် မျက်ကပ်မှန်အတက်များခြင်း ၊ အသက်အရွယ်အရသော်လည်းကောင်း ၊ ပြင်းထန်သော
ရောဂါကြောင့် ဆေးပြင်းများသောက်ရသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း ရရှိတ⁠တ်သော မျက်ရည်ခမ်း ခြောက်ရောဂါများကို အထူးကာကွယ်ပေးပြီး မျက်ဝန်းအစိုဓါတ်ကို ကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း
၅ ။ V.Rohto မျက်စဉ်းတွေမှာ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အချက်တွေ ရှိရင်ပြောပြပေးပါ ။
V.Rohto eye drop တွေကိုသုံးမည်ဆိုလျှင် ရှောင်သင့်တဲ့အချက်လေး တွေတော့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ V.Rohto မျက်စဉ်းရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြား
Chemical products တွေမှာလည်း ရှောင်သင့်တဲ့ အချက်ကလေးတွေရှိပါတယ် ။ ။ မျက်စိခွဲစိတ်ထားသူများ ၆လ ကျော် မှ ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှသာ ခတ်သင့်ပါသည် ။ မျက်စိခွဲပြီးပြီးချင်း ခတ်၍မရပါ ။
ရေတိမ်ရှိသူများခတ်ရန်မသင့်ပါ ။ ပိုးဝင်ပြီး မျက်စိအရမ်းနာနေသူများလည်း ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည် ။ ပိုးဝင်နေပါက ပိုးသတ်ဆေးပါသည့် မျက်စဉ်းတမျိုးမျိုးအား အရင်ခတ်ပေးပြီး သက်သာပါက ပုံမှန်အတိုင်း V.Rohto eye drop လေးများအား ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ဒီတော့ V.Rohto eye drop များကိုသုံးမည်ဆိုလျှင် မျက်ကပ်မှန်တပ်သူများသည် မျက်ကပ်မှန်ချွတ်ပီးနောက် သို့ မျက်ကပ်မှန်မတပ်ခင် နာရီဝက်ခန့်နေမှ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ မျက်ကပ်မှန်တပ်လျက်နှင့် ခတ်၍မရပါ ။ မျက်ကပ်မှန် တပ်လျက် ခတ်လို့ရသော eye drop သည် V.Rohto Dry Eye ဖြစ်ပါသည် ။
V.Rohto မျက်စဉ်းဆေးများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်ကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ… ။
၆ ။ အသားအရေ အဆီပြန်တဲ့အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ် ။ ဝက်ခြံများကို ဘယ်လိုကုသရမလဲ ကျေးဇူးပြုပြီး ရှင်းပြပေးပါ ။
၁. Acnes Oil Control Cleanser ကို ချွေးပေါက်တွင်းရှိ ဖုန်အညစ်အကြေး ၊ အဆီပိုနှင့် ဝက်ခြံများကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုပါ။
၂. ပိုလျံနေသောအဆီများကို ထိန်းရန်နှင့် ချွေးပေါက်များကျဉ်းရန်၊ အရေပြားအစိုဓါတ်ကို ထိန်းညှိနိုင်ရန်နှင့် ဝက်ခြံထပ်မဖြစ်အောာင် ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် Acnes Soothing Toner ကိုအသုံးပြုပါ။
၃. ဝက်ခြံဖြစ်စေသော ဗက်တီးရီးယားပိုးများကို သေစေရန်နှင့် ဝက်ခြံများကိုကုသရန်အတွက် ဝက်ခြံအဖုကြီး ပေါက်တတ်သူဆိုလျှင် Acnes sealing gel ကို ဝက်ခြံအဖုကြီးပေါ်တွင် တို့လိမ်းပေးပါ ။ ဝက်ခြံပုန်းများ ၊ ဝက်ခြံအဖုသေးများ တပြင်လုံးပေါက်တတ်သူ အတွက်ဆိုလျှင် Acnes Medical Cream ကို မျက်နှာတပြင်လုံး လိမ်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ၎င်းပစ္စည်း များကို သင့်နေ့စဉ်အားလပ်ချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်အထိအသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်နေ့စဉ်အစားအသောက် အနေအထိုင်နှင့်အသားအရေ ထိန်းပစ္စည်းများ အသုံးပြုပေးပါက ဝက်ခြံကို ပိုမိုထိရောက်စေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအချက်များအပေါ်တွင် မူတည်ပြီးပျောက်ကင်းလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
၇ ။ Acnes Oil Remover Film ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရပါသလဲ ။
အဆီများသော T zone area (သို့) ချွေးပေါက်များရှိပိုလျှံနေသောအဆီများနှင့်ဖုန်များကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါ သည်။ အချိန်မရွေးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Film ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် အလွယ်တကူ စုတ်ပြဲခြင်းမရှိဘဲ အသုံးပြုရသည်မှာ ပိုကောင်းမွန်ပါသည် ။
၈။ မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံများစွာ ပေါက်နေပါတယ် ။ ဝက်ခြံပျောက်ကင်းရန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး အသုံးပြုခဲ့ပါတယ် ။ မသက်သာပါ ။ အကြံဉာဏ်များပေးနိုင်မလား ။
(၁)ပထမဦးစွာ Acnes Creamy Wash(သို့) Acnes Oil Control Cleanser ကိုမျက်နှာသန့်စင်ရန်အတွက်အသုံးပြုပါ။
(၂) ဒုတိယအဆင့်တွင် ဝက်ခြံထပ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရန် Acnes Soothing Toner ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(၃) နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ဝက်ခြံများကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ရန် ဝက်ခြံအဖုကြီး ပေါက်တတ်သူ ဆိုလျှင် Acnes Sealing Gel ကို ဝက်ခြံအဖုကြီးပေါ်တွင် တို့လိမ်းပေးပါ ။ ဝက်ခြံပုန်းများ ၊ ဝက်ခြံအဖုသေးများ တပြင်လုံးပေါက်တတ်သူ အတွက်ဆိုလျှင် Acnes Medical Cream (သို့)Benzyol Peroxideပါသော Oxy5နှင့် Oxy 10 cream ကို မျက်နှာတပြင်လုံး လိမ်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။
၉ ။ အမဲစက်ရှိသော အသားအရေအတွက် Acnes Vitamin Cream ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား ။
Acnes Vitamin Cream ကို အမဲစက်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Acnes C10 နှင့်တွဲသုံးပါက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။
၁၀ ။ Acnes Vitamin Cream ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ ။
မျက်နှာသန့်စင်ပြီးနောက် ခရင်မ်ကို လုံလောက်သောပမာဏခန့်ယူပြီး မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးအသုံးပြုပါ။ အထူးသဖြင့်ဝက်ခြံ ဖြစ်ပြီး နောက်မျက်နှာ အသားအရေကြမ်းတမ်းခြင်း ၊ မဲညစ်ခြင်းများကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေပါသည်။ ခရင်မ်ကို အသားအရေတွင်း စိမ်ဝင်အောင်လိမ်းပေးပါ။ နေ့စဉ်အိပ်ယာမဝင်မီအသုံးပေးနိုင်ပါသည်။
၁၁ ။ Acnes Vitamin Cream ကိုအသုံးပြူနေပါသည် ။ ဝက်ခြံအဖုသေးလေးများပေါက်လာပါသည် ။ ခရင်မ် နှင့် နို့ရည်များကို အရင်ကတစ်ခါမှ အသုံးမပြုဖူးခဲ့ပါ ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံပေးစေချင်ပါတယ် ။
ရာသီဥတု၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လေထုများကြောင့်လည်း မျက်နှာကျိန်းစပ်ပြီးယားယံခြင်းများဖြစ်လာတတ်ပါ သည် ။ ၎င်းဗီတာမင်ခရင်မ်သည်ဝက်ခြံဖြစ်ပြီးသော အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပစေပြီး ပိုမိုချောမွေ့လာစေပါသည်။ ထို့ပြင်ဝက်ခြံထပ်မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်တားဆီးပေး နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခု အခြေအနေတွင် ပုံမှန်အသားအရည်ရရှိသည့်အထိ ရက်အနည်းငယ်ခန့်စောင့်ဆိုင်ျးပြီး မှန်ကန်သော အညွှန်းအတိုင်း ပြန်လည်အသုံးပြုစေချင်ပါသည် ။ အသုံးပြုရာတွင်ခရင်မ်ကိုအနည်းငယ်သာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၁၂ ။ Acnes Creamy Wash နှင့် Acnes Vitamin Cream ကိုတွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား ။
ကျေးဇူးပြုပြီး အောက်ပါအချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ၁။ မျက်နှာသန့်စင်ရန် Acnes Creamy Wash ကိုအသုံးပြု ပါ။ Acnes Vitamin Cream ကို ညအိပ်ယာမဝင်မီအသုံးပြုပါ။ Acnes series ကိုတစ်နေ့လျင်၂-၃ကြိမ်အသုံးပြု ပေးပါ။ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိလိမ့်မည် ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၁၃ ။ Acnes Oil Control Cleanser သည်အဆီပြန်သူများနှင့် ဘယ်လိုအသားအရေတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသ လဲ ။ Gel ဖြစ်သည့်အတွက် စေးကပ်မှုရှိမှာစိုးရိမ်ပါသည်။ အဆီပြန်တတ်သည့်အတွက် သုံးချင်လို့ပါ ။ တချက်ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ် ။
Acnes Oil Control Cleanser ဟာ အဆီပြန်တဲ့သူများနှင့် ဝက်ခြံရှိသူများ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ အဆီပိုများကို ထိန်းပေးသလို အသားအရေခြောက်ခြင်းမဖြစ်စေရန် အစိုဓာတ်ကိုလည်း ထိန်းပေးနိုင်ပါ သည် ။ Formula တွင် viscosity controller နှစ်မျိုးပါဝင်သောကြောင့် စေးကပ်မှုမရှိပါ ။ ကျေးဇူးတင်ပါ သည်။
၁၄ ။ Acnes Creamy Wash ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း ။
Acnes Creamy Wash ကို အနည်းငယ်ယူပြီး လက်ပေါ်တွင် အမြှုပ်ပြုလုပ်ပါ ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ဂရုတစိုက်စက္ကန့် ၃၀ မှ ၁မိနစ်ခန့် နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပိုးသားကဲ့သို့ နူးညံ့သန့်ရှင်းသောအသားရေရရှိရန် ရေများများဖြင့်ဆေးကြောပါ။
၁၅ ။ Acnes Scar Care ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း ။
Acnes Scar care တွင်လုပ်ဆောင်ချက် ( ၃ ) မျိုးရှိပါသည်။ အမာရွတ်များကိုကုသပေးခြင်း၊ အမဲစက်နှင့် ဝက်ခြံများကိုကာကွယ်ကုသပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Acnes Scar Care ကို မျက်နှာသစ်ပြီးနောက်အမဲစက်၊ အမာရ့ွတ်များပေါ်သို့ နေ့စဉ်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ကုသနေစဉ် ပိုမိုထိရောက်သောအာနိသင်ကိုရရှိရန်အတွက် နေရောင်ခြည်အောက်သွားလာ လှုပ်ရှားရာတွင် ဦးထုပ်၊ Mask နှင့်နေလောင်ခံ ခရင်မ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင် အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာသော အမဲစက်များကို ၁-၃ ပတ်အတွင်း ကုသပြီးနောက်အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီဖြစ်သော အမဲစက်များကို အချိန်ယူကုသရန်လိုပါ သည်။ အမဲစက်အမာရွတ်များကို ကုသရာတွင်စိတ်ရှည်ရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်။
၁၆ ။ Acnes Sealing Gel ကိုမျက်နှာတပြင်လုံး လိမ်းပေးရန် လိုပါသလား ။
မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးအသုံးပြု ရန်မလိုပါ။ Acnes sealing gel ကိုမျက်နှာသစ်ပြီးနောက် ဝက်ခြံဖုလေးများပေါ်သို့ တို့ပြီးလိမ်းပေးနိုင်ပါသည် ။ တစ်နေ့လျှင် ၂-၃ ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁၇ ။ ကျွန်မက ကိုယ်ဝန်ရှိနေတော့ Acnes Productတွေကိုသုံးလို့အဆင်ပြေမလားရှင့် ။
ဟုတ်ကဲ့အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ သင်ရော သင့်ကလေးအတွက်ပါ အန္တရာယ်ကင်းစေပါတယ်။ Acnes Productများကိုတစ်နေ့လျင် ၂-၃ကြိမ်အထိအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၁၈ ။ Acnes Sealing Gel ကို သုံးရက်လောက်မျက်နှာတပြင်လုံးလိမ်းပြီး ယားယံနီရဲပြီး အဖုအပိန့်များ ထွက်လာပါသည် ။ ကျေးဇူးပြူပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါအုံး ။
အသုံးပြုပုံမှားယွင်းနေခြင်းဖြစ်သည် ။ ၎င်းကို ဝက်ခြံဖုလေးများအပေါ်တွင်သာ အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပြီး မျက်နှာ တစ်ပြင်လုံး အသုံးပြုရန်မဟုတ်ပါ ။ ကျေးဇူးပြုပြီး မှန်ကန်သော အသုံးပြုနည်းအတိုင်း ပြန်လည်အသုံးပြု စေချင်ပါသည် ။ ထိုသို့အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နီရဲယားယံခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်မဟုတ်ပါ။
၁၉ ။ AC 10 က ဘာအတွက် ကောင်းပါသလဲ ။
AC 10 သည်သန့်စင်ပြီး ဗီတာမင်စီ ၁၀% ဖော်မြူလာဖြင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေပြားအတွင်းပိုင်းအလွှာထိထိုးဖောက်နို်င်ပြီး အမဲစက်အမာရွတ်များကို ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးပြီး melanin များကိုတားဆီးဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အမဲစက်များ ကိုတဖြေးဖြေးလျော့ပါး လာစေပါသည်။အသားအရေအတွက်Collagen များကို ထောက်ကူအားပေးပြီး ဝက်ခြံအမာရွတ်များကိုလည်း ချောမွေ့ပျာက်ကင်းစေသည်။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အမဲစက်အမာရွတ်များကိုကုသနေစဉ်တွင် စိတ်ရှည်သည်းခံရန်လိုပါသည်။ နေရောင်ခြည်အောက်သွားလာလှုပ်ရှားမည်ဆိုလျှင် ဦးထုပ်၊ Mask (သို့) နေလောင်ခံခရင်မ်တစ်ခုခု အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ရေခဲသေတ္တာ၏သန့်ရှင်းသော tray ထဲသို့ထည့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပြီး နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိခြင်းမှရှာင်ကြဉ်ရပါမည်။
၂၀ ။ ကျွန်မမျက်နှာတွင် ကျောက်ပေါက်မာများ ရှိနေလို့ Acnes C 10 သုံးလို့ရပါသလား ။
ကျောက်ပေါက်မာကဲ့သို့သော ချိုင့်ခွက်အမာရွတ်များသည်ဝက်ခြံကြောင့် ဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုလျှင် Acnes 10 ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပဲအခြားသော အကြောင်းအရာများကြောင့် ဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုလျှင် အရေပြား ဆရာဝန်ထံံသို့ သွားရောက်ကုသပါ ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၂၁ ။ အမဲစက်ဖြစ်နေတာ ၇ နှစ် ၊ ၈ နှစ် ရှိပါပြီ ။ Acnes 10 သုံးလို့ပျောက်နိုင်ပါလား ။
အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အချိန်ယူပြီး ကုသရန်လဲလိုပါသည်။ အမဲစက်အမာရွတ်များ ကုသချိန်တွင် စိတ်ရှည်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ နေရောင်အောက်သွားလာလှုပ်ရှားမည်ဆိုလျှင်နေလောင်ခံခရင်မ်နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုလျှင် ပိုပြီးသင့်တော်ပါသည် ။
၂၂ ။ ကျွန်မ Acnes C10 ဝယ်လာပြီးပါပြီ ။ တစ်နေ့လျှင် ဘယ်နှစ်ကြိမ် အသုံးပြုလို့ရပါလဲ ။ ဘယ်မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာနှင့် တွဲသုံးရင် သင့်တော်ပါမလဲ ။
Acnes C-10ကို အမဲစက်အမာရွတ်များအတွက် တစ်နေ့လျင်နှစ်ကြိမ်အသုံးပြု နိုင်ပါ သည်။ Acnes Facial Cleanser များနှင့်တွဲ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၂၃ ။ အသက် ၁၄ နှစ်ရှိပါပြီ ။ ဝက်ခြံအတွက် Acnes သုံးလို့ သင့်တော်ပါသလား ။
ဟုတ်ကဲ့ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ် ။ အောက်ပါအဆင့်အတိုင်းအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
(1) Acnes Creamy wash သို့ Acnes Oil Control Cleanser ကိုမျက်နှာသစ်ရန်အတွက်အသုံးပြုပါ။
(2) Acnes Soothing Toner ကို ဝက်ခြံထပ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးရန် နှင့် Acnes sealing gel ကို ဝက်ခြံ ပျောက်ကင်းရန်အသုံးပြုပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
၂၄ ။ V.Rohto Dry Eye ကို မျက်ကပ်မှန်တပ်ထားစဉ်မှာ ခပ်လို့ရသည်ဟု သိထားပါသည် ။ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးတွင် သုံးလို့ရပါသေးသလဲ ။ ရှင်းပြပေးပါ ။
V.Rohto Dry Eye တွင် Hydroxyethylcellulose ပါဝင်ပြီး မျက်ရည်တု အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးကာ မျက်ကပ်မှန်တပ်ထားစဉ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ထို့အပြင် မျက်ရည်ခမ်းခြောက်သော Dry Eye ရောဂါ ရှိသူများအသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ မျက်သားတက်သူများလည်း lubricating eye drop အနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင် ပါသည် ။
၂၅ ။ Acnes Pure White Cleanser နှင့် Cream ကို ဝက်ခြံရှိလျှင် သုံးလို့ရပါသလား ။
White + Formula အသစ်ဖြင့် Acnes Pure White Cleanser နှင့် Cream သည် AHA,BHA ပါဝင်သည့် အတွက် ဝက်ခြံရှိသူများလည်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။
၂၆ ။ Remos IB နှင့် Remos IR ဘယ်လိုကွာခြားပါသလဲ ။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွင် အသုံးပြုရပါသလဲ ။
Remos IB ကို ပိုးမွှားကိုက်ခံရ၍ အရေပြားနီရဲရောင်ရမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါက အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ Remos IR ကို ခြင်မကိုက်စေရန် လိမ်းပေးနိုင်ပြီး spray နှင့် cream နှစ်မျိုးရှိပါသည် ။
၂၇ ။ ခြင်မကိုက်လိမ်းဆေး Remos IR ကို ကလေးငယ်လေးများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား ။
Remos IR ကို အသက် (၄) နှစ်မှစ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ Remos IR တွင် spray နှင့် cream (၂) မျိုး ရှိပါသည် ။ အသက် (၄) နှစ်အောက် ကလေးများအား အသားပေါ်တွင် မလိမ်းပေးဘဲ အဝတ်အစား ပေါ်တွင် Remos IR spray ဖြန်းပေးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။
၂၈ ။ ဝက်ခြံအတွက် Oxy5နှင့် 10 ကို အသုံးပြုချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွင် အသုံး ပြုနိုင်ပါသလဲ ။ဘယ်လိုသုံးရပါသလဲ ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ရှင်းပြပေးပါ ။
ဝက်ခြံပုန်းများ ၊ ဝက်ခြံအဖုသေးများ တပြင်လုံး ပေါက်နေလျှင် အသုံးပြုပေးနိုင်ပါသည် ။ အခြား cosmetics များနှင့် တွဲပြီးမသုံးပါနှင့် ။ တစ်နေ နှစ်ကြိမ် သို့ သုံးကြိမ် မျက်နှာတပြင်လုံး လိမ်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ယခုမှ စသုံးမည် ဆိုပါက oxy5ကို အသုံးပြုပေးပါ ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
၂၉ ။ Selsun shampoo ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ။
Slesun ဗောက်ပျောက်ခေါင်းလျှော်ရည်ကို စ လျှော်လျှော်ခြင်းတွင် တစ်ပတ် (၂)ကြိမ် လျှော်ပေးပါ ။ ဗောက်များ သက်သာလာပါက တစ်ပတ် (၁) ကြိမ်သာ လျှော်ပေးပါ ။ အခြား shampoo သို့ conditioner များနှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။
၃၀ ။ Acnes Scar Care ကိုအမြင့်မားဆုံး ထိရောက်မှုရှိစေရန် ဘယ်လိုသုံးရပါမလဲ ။
မျက်နာသစ်ပြီးနောက် အမဲစက်အမာရွတ်များပေါ်တိုက်ရိုက်လိမ်းပေးခြင်းဖြင့်ထိရောက်စေပါသည်။ တစ်နေ့လျင် ၂ ကြိမ်သို့ ၃ ကြိမ်အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူူူးတင်ပါသည် ။
၃၁ ။ Acnes Scar Care ကိုတစ်ပတ်လောက် အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် မသက်သာသေးဘူး ။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ ။
၎င်းအမဲစက်များသည်ဝက်ခံကုသပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကုသရန် အနည်းဆုံးအချိန် ၄ ပတ်ယူရပါတယ်။ အမဲစက်ကုသရန်အတွက် စိတ်ရှည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်နေ့လျင် ၂-၃ကြိမ်အထိအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နေရောင်အောက်တွင်သွားလာလှုပ်ရှားမည်ဆိုလျင်ဦးထုပ် ၊ခြေအိတ်၊ လက်အိတ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကုသမှုကိုပိုမိုထိရောက်စေပါသည်။
၃၂ ။ Acnes Sealing Gel ဖြင့် ဝက်ခြံများကို မည်သို့ကုသရမည်နည်း ။ အသုံးပြုပုံရှင်းပြပေးပါ ။
၁။ Acnes Creamy Wash သို့ Acnes Oil Control Cleanser ဖြင့်အဆီများ ၊ ဖုန်များ ၊ အညစ်အကြေးများ နှင့်ချွေးပေါက်တွင်းရှိအဆီများဖယ်ရှားရန်မျက်နှာသစ်ပါ။
၂။ အဆီများကိုထိန်းနိုင်ရန် ၊ ချွေးပေါက်များကျဉ်းစေရန် ၊ အရေပြားအစိုဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းပြီး ချောမွေ့နေစေရန်နှင့် ဝက်ခြံထပ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရန်အတွက် Acnes Soothing Toner ကိုအသုံးပြုပါ။
၃။ ဝက်ခြံဖြစ်စေသောဗက်တီးရီးယားပိုးများကို သေစေရန်နှင့်ဝက်ခြံများကိုကာကွယ်ကုသရန်အတွက် Acnes sealing gel ကိုအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ Acnes series များကို တစ်နေ့လျှင်၂-၃ ကြိမ်အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အစားအသောက်အနေအ ထိုင်နှင့်အသားအရေထိန်းပစ္စည်းများ အသုံးပြု ခြင်းဖြင့် ဝက်ခြံကိုပိုမိုထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၃၃ ။ အဆီပြန်သော အသားအရေအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည် ။ မိတ်ကပ် ကိုလဲ နေ့စဉ်အသုံးပြုပါသည် ။ Acnes ဘယ်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုလျှင် သင့်တော်ပါသလဲ ။
၁. ချွေးပေါက်အတွင်းရှိ အဆီများ၊ဖုန်များ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားသန့်စင်ရန်အတွက် Acnes Oil Control Cleanser ကို အသုံးပြု သင့်ပါသည်။
၂. အဆီများကိုထိန်းနိုင်ရန် ၊ ချွေးပေါက်များကျဉ်းစေရန် ၊ အရေပြားအစိုဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းပြီး ချောမွေ့နေစေရန်နှင့် ဝက်ခြံထပ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရန်အတွက် Acnes Soothing Toner ကိုအသုံးပြုပါ။
၃. ဝက်ခြံကိုကာကွယ်ရန်နှင့် နေလောင်ဒဏ်အန္တာရယ်မှကင်းဝေးနိုင်ရန်အတွက် Acnes C10 ကိုအသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
၃၄ ။ Scar Z ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရပါသလဲ ။ Acnes Scar Care နှင့် Scar Z တူပါလား ။ ဘာကွာခြား ပါလဲ ။
Acnes Scar Care သည် ဝက်ခြံဖြစ်ပြီးကျန်ရှိနေသောအမဲစက် ၊ အမာရွတ်များကို ထိရောက်စွာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည် ။ Scar Z သည်မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ မည်သည့် အမာရွတ် မျိုးကိုမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ကျေးဇူူူးတင်ပါသည် ။
၃၅ ။ Sunplay baby mild ကို ကလေး ဘယ်အရွယ်မှစ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ ။ ပြောပြပေးပါ ။
Sunplay baby mild ကို ၆ လ အထက် ကလေးငယ်များစ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ Sensitive Skinရှိသူများလည်း သုံးနိုင်ပါသည် ။ ကျေးဇူူူးတင်ပါသည် ။
၃၆ ။ ဝက်ခြံရှိပြီး အဆီပြန်သော အသားအရေဖြစ်ပါသည် ။ Acnes Creamy wash ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါသည် ။ သို့သော် အဆီ နှင့် ဝက်ခြံများ မသက်သာပါ ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဘာသုံးရမလဲ အကြံပေးစေလိုပါသည် ။
မျက်နှာသစ်ရာတွင် Acnes Oil Control Cleanser ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းဖြင်ပိုမိုထိ ရောက်စေနိုင်ပါသည်။ T-Zone area နှင့်ချွေးပေါက်ကျယ်သော နေရာ များကိုအဆီထိန်းရန်အတွက် Acnes Soothing Toner ကိုတွဲဖက်အသုံးပြု သင့်ပါသည်။နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ဝက်ခြံအတွက် Acnes sealing gel ကိုဝက်ခြံဖု များ ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက် အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ တစ်နေ့လျင်၂-၃ ကြိ မ် အသုံး ပြု နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူူူးတင်ပါသည် ။
၃၇ ။ Deep Heat လိမ်းဆေးအား ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ ။
Deep Heat လိမ်းဆေးတွင် MethylSalicylate ပါဝင်ပြီး ကြွက်သားနာခြင်း ၊ ပခုံးနာကျင်တောင့်တင်းခြင်း ၊ ခါးနာခြင်း ၊ အဆစ်အမြစ်နာခြင်း နှင့်လေးဘက်နာကဲ့သို့သောနာကျင်ခြင်းများအတွက် နာနေသော နေရာအား ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ကာ လိမ်းပေးနိုင်ပါသည် ။
၃၈ ။ New V.Rohto , V.Rohto Cool နှင့် V.Rohto Vitamin တူတူပါပဲလား ။ ဘာကွာပါသလဲ ။
ဟုတ်ကဲ့ ။ သုံးမျိုးစလုံးက eye vitamin မျက်စိအားဖြည့်ဆေးများဖြစ်ပါတယ် ။ တောက်ပရွှန်းလက်သော မျက်ဝန်းတစ်စုံအတွက် New V.Rohto ကိုအသုံးပြုပေးပါ ။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သော မျက်ဝန်းများအတွက် menthol ပမာဏပိုပါဝင်သော V.Rohto Cool ကိုသုံးပေးပါ ။ ဝေဝါးနေသော မျက်ဝန်းများအတွက် V.Rohto Vitamin လေးကို အသုံးပြုပေးနိုင်ပါသည် ။ ကျေးဇူူူးတင်ပါသည် ။
၃၉ ။ Sunplay Super Block ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား ။ အကြံဉာဏ်ပေးစေလိုပါသည် ။
Sunplay Super Block သည် SPF 81 နှင့် PA++++ ပါဝင်ပြီး နေလောင်ဒဏ်ကို အထိရောက်ဆုံးနှင့် အမြင့်မားဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည် ။ ပင်လယ်ကမ်းခြေခရီးထွက်မည့်သူများ ၊ ရေကူးနေသူများ ၊ တောင်တက်ခရီးသွားမည့်သူများနှင့် ပြင်းထန်သော နေရောင်အောက်တွင် အလုပ်လုပ် နေရသူများ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ ပုံမှန်နေ့စဉ် အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Sunplay Outgoing , Sunplay Whitening UV , Sunplay Natural Gel & Cream များမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တခုခုအားရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ sensitive skin များအတွက် Sunplay Baby Mild ကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ် ။ ကျေးဇူူူးတင်ပါသည် ။
၄၀ ။ မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံဖုသေးတွေ ၊ အဆီဖုလိုဖြစ်နေတဲ့ ဝက်ခြံပုန်းလေးတွေ တပြင်လုံးပေါက်နေပါတယ် ။ အဲ့ဝက်ခြံတွေကို ဘယ်လိုကုသရမလဲ ။ Acnes series ထဲက ဘယ်ဟာကိုသုံးရမလဲ ။ အကြံဉာဏ်ပေးပါအုံး ။
၃။ ဝက်ခြံဖြစ်စေသောဗက်တီးရီးယားပိုးများကို သေစေရန်အတွက် ၎င်း ဝက်ခြံပုန်းများ ၊ ဝက်ခြံအဖုသေးလေးများပေါ်သို့ Acnes Medical Cream တပြင်လုံးလိမ်းကာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ အခြား cosmetics များနှင့် တွဲမသုံးပါနှင့် ။ Acnes series များကို တစ်နေ့လျှင်၂-၃ ကြိမ်အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အစားအသောက်အနေအထိုင်နှင့်အသားအရေထိန်းပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဝက်ခြံကိုပိုမိုထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၄၁ ။ ဝက်ခြံပျောက်ကင်းရန်အတွက် erythromycin သုံးခဲ့ပါသည် ။ မသက်သာပါ ။ ယခု Acnes Sealing Gel ကို သုံးနေပါတယ် ။ လိမ်းပြီးနောက်မျက်နှာယားယံပြီး ပူလာတယ်လို့ ခံစားရပါတယ် ။ ဘယ်လိုဆက် လုပ်ရမလဲ အကြံဉာဏ်လေးပေးပါ ။
အသားအရေထိန်းပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုတော့မည်ဆိုလျင်အသုံးမပြုမီ ဦးစွာစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်အသားအရေတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သော ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်လာပါက အသုံးပြုခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပါ။ ဝက်ခြံ ကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ကုသရန်အတွက်Acnes Creamy wash သို့ Acnes Oil Control Cleanser ဖြင့် မျက်နှာသစ်ပါ။ Acnes Soothing Toner ကိုဝက်ခြံအသစ်များ ထပ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရန်နှင့်Acnes sealing gel ကို ဝက်ခြံကုသရန်အတွက် အသုံးပြုခြင်းအထိရောက်ဆုံး အာနိသင်ကိုရရှိစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ Acnes sealing gel ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက ဝက်ခြံအဖုကြီးပေါ်တွင် တို့လိမ်းပေးပါ ။ မျက်နှာတပြင်လုံး လိမ်းပေးရန် မလိုပါ ။ မှန်ကန်စွာ အသုံးပြု စေလိုပါသည် ။ ဝက်ခြံများပျောက်ကင်းသွားပါက Acnes Sealing gel အသုံးပြုနေခြင်းကိုရပ်ပြီး Acnes Vitamin Cream ကို ဝက်ခြံကြောင့် ပျက်စီးသွားသောအသားအရေ ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန် အတွက်ဆက်လက်အသုံး ပြု နိုင်ပါသည် ။ ကျေနပ်မှုအထူးရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
၄၂ ။ Lipice နှုတ်ခမ်းနီများကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရပါသလဲ။
နှုတ်ခမ်းသားခြောက်သွေ့ကွဲအက်ခြင်းများအတွက် ရာသီမရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အရောင်ပါသောနှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင် အောက်ခံအဖြစ်အသုံးပြုပေးပါက နှုတ်ခမ်းသားကို ပိုမိုရွှန်းလက်တောက်ပစေပါသည်။
၄၃ ။ Lipice နှုတ်ခမ်းများကို ယောင်္ကျားလေးများအသုံးပြုနိုင်ပါလား ။
Lipice Colorless (Lipbalm)ကိုအရောင်မပါရှိသောကြောင့် ယောကျာၤးလေးများလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၄၄ ။ Hada Labo Productများသည် မည်သည့်အတွက် ထုတ်လုပ်ထားသနည်း။
Hada Labo Productများသည် အသားအရေထိန်းသိမ်းဖို့ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ထားသော Skin Care Productဖြစ်ပါသည်။
၄၅ ။ Hada Labo Series ဘယ်နှစ်ခုရှိပါသလဲ၊ ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
Hada Labo Series (၃)မျိုးရှိပါတယ်။
(၁) Hada Labo Advanced Nourish Series – အသားအရေကို အမြင့်မားဆုံးရေဓာတ်ဖြည့်တင်ပေးနိုင်သော Moisturizing Seriesဖြစ်ပါသည်။ Hada Labo Advanced Nourish Seriesတွင် Cleanser, Lotion ( Normal Skin ), Lotion ( Oily Skin ), Cream ဆိုပြီး Product (၄)မျိုးရှိပါသည်။
(၂) Hada Labo Perfect White Series – အသားဖြူဝင်းစေသော Whitening Seriesဖြစ်ပါသည်။ Hada Labo Perfect White Series တွင် Cleanser, Lotion, Milk, Essence, Cream ဆိုပြီး Product(၅)မျိုးရှိပါသည်။
(၃) Hada Labo Pro Anti-Aging Series – အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီး အရွယ်တင်နုပျိုစေသော Anti-Aging Series ဖြစ်ပါသည်။ Hada Labo Pro Anti-Aging Series တွင် Cleanser, Lotion, Essence, Cream ဆိုပြီး Product(၄)မျိုးရှိပါသည်။
၄၆ ။ Hada Labo Productများကို မည်သည့်အသက်အရွယ်မှ စပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
Hada Labo Advanced Nourish Seriesကို မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Hada Labo Perfect White Series ကို အသက်(၂၀)ကျော်မှစပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Hada Labo Pro Anti-Aging Seriesကို အသက်(၂၅) ကျော်မှစပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၄၇။ ဝက်ခြံရှိသောအသားအရေဖြစ်ပါတယ် Hada Labo မည်သည့်အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရမလဲ။
Hada Labo Advanced Norish Seriesကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Hada Labo Advanced Norish Seriesကို အသားအရေမရွေး၊ အသက်အရွယ်မရွေး၊ ရာသီဥတုမရွေးသုံးနိုင်ပါတယ်။
၄၈ ။ Hada Labo Perfect White နှင့် Hada Labo Pro Anti-Aging Seriesကို ဝက်ခြံရှိနေချိန်တွင် အသုံးပြုလို့ရပါသလား။
ဝက်ခြံအနည်းငယ်ပေါက်နေလျှင်သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဝက်ခြံအများကြီးပေါက်နေပြီး ဓာတ်မတည့်လွယ်သောအသားအရေအမျိုးအစားဖြစ်ပါက စမ်းသပ်ပြီးမှအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
၄၉ ။ Hada Labo Perfect White Essence နှင့် Pro Anti-Aging Essence ကို မျက်နှာတပြင်လုံး လိမ်းပးရန်လိုပါသလား။ မည်သို့အသုံးပြုရမလဲ။
မျက်နှာတပြင်လုံးလိမ်းပေးရန်မလိုပါ။ Hada Labo Perfect White Essenceကို အမည်းစက်၊ အမာရွတ်များပေါ်ကို အဓိကထားပြီး လိမ်းပေးရပါမယ် ။ Hada Labo Pro Anti-Aging Essenceကို အရေးအကြောင်းများပေါ်သို့ အဓိကထားပြီးလိမ်းပေးရပါမယ်။
အဆင့် (၁) Cleanserဖြင့် မျက်နှာသစ်ပါ။
အဆင့် (၂) Lotionလိမ်းပါ။
အဆင့် (၃) Essenceလိမ်းပါ။
အဆင့် (၄) Milk (သို့) Cream (သို့) ၂ခုစလုံးအသုံးပြုပေးပါ။